फागुन ७, पोखरा । विगत दुई दशकदेखि पोखरालाई कर्म थलो बनाएकी सफल महिला उद्यमी हुन् मिलन थापा । विसं २०५२ सालमा पोखराका व्यवसायी धुब्रबहादुर थापासँग वैवाहिक बन्धनमा जोडिएपछि उनको व्यावसायिक यात्रा शुरु भएको हो । वैवाहिक जीवनको यात्रासँगै उनले गण्डकीमै पहिलो पटक सञ्चाल गरिएको ‘गण्डकी रिकन...
फागुन ७, म्याग्दी । जापान ! हजारौं नेपाली युवाहरुको सपनाको देश । लाखौं खर्च गरेर रोजगारीका लागि जापान जान मरिहत्ते गर्ने नेपाली युवाहरुको भिडमा यहाँका एकजना युवाले जापानको गतिलो नोकरी छोडेर म्याग्दीको बेनी नगरपालिका– १ रत्नेचौरमा रू. १ करोड बढीको लगानीमा पशुपालन गर्न शुरु गरेका छन् ...
म्याग्दीमा यान्त्रिक हलोको प्रयोग बढ्दो
म्याग्दी । म्याग्दीमा पछिल्लो समय यान्त्रिक हलो (मिनी पावर टिल्लर)को प्रयोग बढ्दै गएको छ । जिल्लाको ग्रामीण भेगका किसानले घरमा पालिएका गोरु बेचेर यान्त्रिक हलो किन्न थालेका छन् । गाउँमा कृषि मजदूरको अभाव हुनुका साथै परम्परागत तरीकाले खेती गर्दा लागत बढी परेको भन्दै किसानले यान्त्रिक हलोको प्रय...
दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् : बेलायतबाट सवा २ करोड लगानी
म्याग्दी । पश्चिम म्याग्दीको दरबाङमा बन्न लागेको २५ मेगावाटको दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि बेलायतमा रहेका म्याग्दीका युवाले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । मगर संघ म्याग्देली समूह, बेलायतको मिडल्यान्ड शाखाको गत आइतवार ननिटनमा बसेको बैठकले जलविद्युत् आयोजनाका लागि रू. २ कर...
म्याग्दीमा दुई ओटा पुल निर्माण
म्याग्दी (अस) । म्याग्दीमा दुईओटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । मंगला र मालिका गाउँपालिकाको सिमाना दुखु खोलामा निर्माण भएको मोटरेबल पुल र मंगला गाउँपालिका–२ को काफलचौर र कोत्रवाङलाई जोड्ने झोलुंगे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको हो । दुवै पुलको सोमवार गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्...
फागुन ६, म्याग्दी । हिमाली जिल्ला म्याग्दीको ग्रामिण भेगका कृषकहरुले घरका गोरु बेचेर यान्त्रिक हलो किन्न थालेका छन् । गाउँमा कृषि मजदुरको अभाव हुनुका साथै गोरु पालेर परम्परागत तरिकाले खेती गर्नुभन्दा यान्त्रिक हलोको प्रयोगले लागत घटाउने भएपछि कृषकहरुले घरमा पालेको हलगोरु बेचेरै भएपनि यान्त्रिक हल...
म्याग्दीमा पक्की पुल बन्दै
म्याग्दी । हिमाली जिल्ला म्याग्दीको पश्चिम भेगका बस्तीहरू जोड्नेगरी धमाधम पक्की पुलको निर्माण गर्न थालिएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारले गरी म्याग्दीखोला भेगका सात स्थानमा मोटरेबल पुल बनाउन लागेका हुन् । पुल निर्माण सम्पन्न गएपछि दुर्गम बस्तीहरू सीधा सडक सञ्जालमा जोडिनेछन् । संघीय सरकार अन्तर्गत रहे...
थाहानगरमा बीउ आलु भण्डारणको समस्या : रकम निकासा नहुँदा काम अलपत्र
हेटौंडा । बेमौसमी तरकारीका लागि प्रख्यात मकवानपुरको दामन–पालुङका कृषकले आफ्नो उत्पादनको सुरक्षाका लागि शीतभण्डारको माग गरेको करीब २ दशक भयो । यतिका वर्ष बितिसक्दा सरोकारवाला निकायबाट उनीहरू आश्वासन मात्र पाए । यसबीचमा थाहा नगरपालिकाले शीतभण्डार निर्माण शुरू गरेपछि स्थानीय कृषकले राहत मिल्ने आश...
पर्वतमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू
पर्वत । पर्वतमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू भएको छ । जिल्लाका ७ ओटा स्थानीय तहका ६१ ओटै वडा समेट्ने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बताएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले सोमवार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेल, उपप्रमुख...
स्याङ्जा (अस) । स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले बालविकास कक्षामा दिवा खाजा सञ्चालन गरेसँगै विद्यार्थी नियमित उपस्थित हुन थालेका छन् । नगरभित्रका ४२ सामुदायिक विद्यालयका बालविकास कक्षामा दिवा खाजा कार्यक्रम लागू भएसँगै कक्षामा विद्यार्थीको नियमित उपस्थितिका साथै शिक्षण सिकाइ समेत बढेको नगर प्रमुख छायार...